I-Logocloud: izixhobo zasimahla ezenziwa ngabanyangi ngentetho- Uqeqesho loLwazi
I-Logocloud: izixhobo zasimahla ezenziwa ngabanyangi ngentetho
Eli phepha lenziwa emva kwe-COVID-19 engxamisekileyo ethintela ukubanakho kunye nokufikelela kwiiseshoni zonyango lwentetho. Abanyangi abathetha ababonileyo abakhankanywe kweli phepha babelane ngesisa ngezixhobo zabo ukuvumela abantwana kunye nabantu abadala ukuba babe nezixhobo zokuziqhelanisa ekhaya ngelixa belinde ukuqala kwakhona kwemisebenzi yesiqhelo. Umbulelo wam osuka entliziyweni uya kubo bonke.
Eli phepha alinazo ii-webhu endizenzileyo, ezifumaneka simahla kwi GameCenter ngoQeqeseleloCognitivo. Ukundithumela ikhonkco lomsebenzi okanye into endibhalileyo kuyo [imeyile ikhuselwe] ucacisa igama lakho, isihloko somsebenzi kunye nenkcazo emfutshane ukuba ngubani oza kuyisebenzisa. Kubalulekile ukuba into ethunyelweyo ayinayo imifanekiso okanye umxholo okhuselwe lilungelo lokushicilela. Ukuhlonipha ubuchule boogxa bakhe, izinto ezifunyenweyo zipapashwa ngaphandle kokulungiswa ngabangaphantsi.
Izilabhasi, ifonology kunye nemetemonology
Tshatisa iisilabhasi Ngu-Elena Angelucci
Chaza amagama ngesandi sokuqala esimnandi c ufumanise iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Biza amagama kunye / f / kunye nokufumanisa iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / k / kwaye ufumane iphazili (1) nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / k / kwaye ufumane iphazili (2) nguBenedetta Ticozzelli
Qamba amagama kunye / l / + nekhonsonitha uze ufumane iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Nika amagama la kunye / r / + kunye nekhonsoniyali kunye nokufumanisa iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / s / kunye nokufumanisa iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / kunye / kunye ne / kunye / (1) kunye nokufumana iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / kunye / kunye ne / kunye / (2) kunye nokufumana iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / sz / kwaye ufumane iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Chaza amagama kunye / t / ophakathi kwaye ufumane iphazili nguGiorgia Zaghini
Chaza amagama ngokwasekuqaleni / v / ophakathi kwaye ufumane iphazili nguBenedetta Ticozzelli
Ucalulo r / l nguAlessandra Rocchi
Ucalucalulo lweSki / Ci nguGiulia Montagnese
Ucalucalulo t / d Ngu-Elena Angelucci
Masenze ikhekhe (i-onomatopoeia) nguGiulia Montagnese
Yintoni isilabhasi yokuqala NguAlice Martinelli
Iirayisi kunye ne-C emnandi kwindawo ephakathi nguGiorgia Zaghini
Iirms phakathi kwe-T nguGiorgia Zaghini
Inkumbulo yeebisyllables nguAlessandra Rocchi
Inkumbulo yamagama anencasa c kwindawo yokuqala nguGiorgia Zaghini
Inkumbulo yamagama kunye / k / nguBenedetta Ticozzelli
Inkumbulo yamagama kunye / f / nguBenedetta Ticozzelli
Imemori yamagama kunye / kunye / kunye nolokuqala NguMonica Checchin
Imemori yamagama kunye / kunye / kunye / no / konsonanti NguSara Frizzarin
Imemori yamagama nge-Central -ST- (1) NguRoberta Benedetti
Imemori yamagama nge-Central -ST- (2) NguRoberta Benedetti
Imemori yamagama ngokuqala kukaT- (1) nguGiorgia Zaghini
Imemori yamagama ngokuqala kukaT- (2) nguGiorgia Zaghini
Inkumbulo yamagama kunye / ts / ngu-Bendetta Ticozzelli
Inkumbulo yesilabhasi kunye ne-S NguSara Frizzarin
Iphazili yamagama inencasa C nguGiorgia Zaghini
Jonga umfanekiso we-S + NguSara Frizzarin
Jonga umfanekiso u-S + wokuqala weqabane NguSara Frizzarin
Iimpawu ezine-S (fumana umfanekiso ofihliweyo) NguSara Frizzarin
Hlanganisa amagama kunye nesilabhasi yokuqala efanayo NguAlice Martinelli
Chaza amagama kunye / k / ngu-Ambra Cravero
Chaza amagama kunye / tr / kunye nokufumanisa iphazili NguSerena Immovilli
Iirms nge / g / NguMaria Elisa Kanale
Imemori yamagama ane-sc NguMaria Elisa Kanale
Tshatisa uluhlu lwamagama kunye nonobumba M nguValentina Piazzoli
Tshatisa uluhlu lwamagama kunye nonobumba u-V nguValentina Piazzoli
Tshatisa uluhlu lwamagama kunye nonobumba u-L nguValentina Piazzoli
Tshatisa uluhlu lwamagama kunye nonobumba F nguValentina Piazzoli
Tshatisa iisilabhasi kunye nonobumba u-N nguValentina Piazzoli
Ukuchongwa kwamagama kunye neqela le-SP (Ben10) nguSara Manzi
Ukuchongwa kwamagama kunye neqela le-SP (Frozen) nguSara Manzi
Ukuchaza amanani kunye / k / Median (SpiderMan) nguSara Manzi
Inkumbulo yokuqala yesilabhasi nguAlice Fazzone
Hlanganisa amanani aqala ngendlela efanayo nguAlice Fazzone
Bhangqa imifanekiso ephela ngesilabhasi efanayo nguAlice Fazzone
Inkumbulo yemvano-siphelo nguAlice Fazzone
Inkumbulo yokugqibela yesilabhasi nguAlice Fazzone
Ipuzzle yamagama e-Quadrisyllabic nguAlice Fazzone
Iirms nge / r / nguAlice Fazzone
Iiphazili ezisisiyatha nguAlice Fazzone
Iphazili yamagama ukwahlukana nguAlice Fazzone
Izicengceleko zokutshata 1 nguAlice Fazzone
Izicengceleko zokutshata 2 nguAlice Fazzone
Iphazili ye-SKI (indawo yokuqala kunye nephakathi) nguFrancesca Austoni
Inkumbulo ye-SCI (indawo yokuqalisa) nguFrancesca Austoni
Imemori ye-SCI (isikhundla sokuqala kunye nesiphakathi) nguFrancesca Austoni
Imbali yesidlo sakusasa NguMonica Checchin
Nyanzela ubalise ibali "Hedgehog, squirrel kunye fly" nguSara Frizzarin
Hlela kwakhona uze ubalise ibali "Ibhabhathane uTiffi" NguSara Frizzarin
Amabali ngokulandelelana NguAlice Martinelli
Lungelelanisa amaxesha kwakhona ngu-Ambra Cravero
Tshatisa ibinzana nomfanekiso (1) NguAlberto Mariotto
Tshatisa ibinzana nomfanekiso (2) NguAlberto Mariotto
Inqaku elinye-nye nguAlessandra Rocchi
UCloze (isihloko sikaHenry Hart) nguAlessandra Rocchi
Isigqibo sipelo nguAlessandra Rocchi
I-Hangman yamagama nge-CH NguAlberto Mariotto
I-Hangman yamagama nge-CI-CE NguAlberto Mariotto
I-Hangman yamagama kunye ne-GL NguAlberto Mariotto
I-Hangman yamagama nge-GN NguAlberto Mariotto
I-Hangman yamagama nge-SC NguAlberto Mariotto
Masifunde… GH / CH Ngu-Elena Angelucci
Fumana igama elichanekileyo / izibini zemifanekiso NguAlberto Mariotto
Ucalucalulo lweCI / GI nguGiulia Groppelli
Hlanganisa amagama kunye nemifanekiso NguAlice Martinelli
Ucalulo lwamagama kunye no-V no-F NguAlice Martinelli
Funda esi sivakalisi uze usidibanise nomfanekiso olungileyo NguAlice Martinelli
Amagama enqamlezo kunye nebranti yeleta nguClaudia Fusari
Ukulandelwa kwezichazi NguRoberta Marracino
Ukuqonda izivakalisi ngu-Diego Abenante
Ukwahlulahlulahlula iicandelo kunye neeantemics
Ukwahlula-hlula kweentyatyambo, izixhobo zombane kunye nokutya nguAlessandra Rocchi
Masiyilungise Ngu-Elena Angelucci
Ukutshatisa kunye nokunika imibala imibala ngu-Ambra Cravero
Hlela kwakhona izilwanyana ukusuka kwelona likhulu liye elincinci ngu-Ambra Cravero
Ukwahlulwa kokutya okumnandi nokunencasa ngu-Ambra Cravero
I-wallet yeodolo (iingqekembe) NguSerena Immovilli
I-wallet yeodolo (iingqekembe zemali kunye neebhanki) NguSerena Immovilli
Ndingayithenga nge € 2,5? NguSerena Immovilli
imigqomo NguDileta Ruggeroni
Imidlalo yangaphakathi / yangaphandle NguDileta Ruggeroni
Sibala! Ngu-Elena Angelucci
Iintsomi kwiitafile eziphindaphindayo nguGiorgia Zaghini
Siya-odola amanani 1 ukuya ku-5 NguAlberto Mariotto
Siya-odola amanani 1 ukuya ku-10 NguAlberto Mariotto
Ngakumbi okanye ngaphantsi kwee-euro? NguSerena Immovilli
Ngakumbi okanye ngaphantsi? (1) NguSerena Immovilli
Ngakumbi okanye ngaphantsi? (2) NguSerena Immovilli
Fumana isibini samaxesha alinganayo (emva kwemini) nguSerena Immovilli
Fumana isibini samaxesha alinganayo (kusasa) NguSerena Immovilli
Leliphi ixesha? NguSerena Immovilli
Ukujonga kunye nokuveliswa kwezibini ezibini zeS / T
ikhonkco: Khuphela kuDrive
Indlela yokusebenzisa: Kwezi ziqheliso, isandi ngasinye sinxulunyaniswa nombala kunye nomlinganiswa.Umsebenzi womntwana kukwamkela ukuba ingaba isandi esiveliswe ngumntu omdala siyahambelana na nomlinganiswa wokuqala okanye wesibini. Umzekelo, ngalo lonke ixesha umntu omdala evakalisa isilabhabheli yoMzantsi Afrika, umntwana kuya kufuneka akhombe kwisangqa esiluhlaza ngaphezulu kwescreen ukuqhubela phambili isimilo. Ukuba, kwelinye icala, umntu omkhulu ubiza i-FA, umntwana kufuneka akhombe kwisangqa esimfusa. Ngokucacileyo ungazibuyisela umva iindima ngokucela umntwana ukuba avelise isilabhasi echanekileyo, ngelixa umntu omdala kuya kufuneka aqashele ukuba sesiphi isandi asivileyo.
Izixhobo zocalulo t / k
Umbhali: UAlice Sordi
Umdlalo wokuqala weCA / CIA Goose
Umbhali: I-Federic Ciceri
Umdlalo ophakathi weCA / CIA Goose
Iisemantics -Yintoni ongenayo
I-Semantics -Ukufana nokwahluka
Fumana amagama kunye ne-v
Zoba amagama kunye ne-v
Ukubiza amagama ngamanqaku
Ucalulo / ts
Inkcazo: emva kokudibanisa isandi / s / nenyoka kunye nesandi / ts / kwisikere, qala umboniso, cofa utolo lwasekunene kwaye umamele isandi okanye isilabhili uze ubuze umntwana ukuba aphathe inyoka okanye isikere kuxhomekeke kwisandi esiviweyo, umfanekiso ohambelanayo uya kuhamba kuphela xa ucofa imouse.
/ v / kwilabhoratri kunye nehlelo
Inkcazo: ukuqala inkcazo, ukucinezela utolo kwenza ukuba inqanawa ihambe kwaye kwangaxeshanye inxibelelanise ifonim / v / ukuyolula ukuya kwikhonkco; Ukucinezela utolo, imifanekiso ibonakala inegama lesandi ekujolise kulo.
Inkcazelo: qala inkcazo, nqakraza kwisilwanyana ngasinye uya kuva ivesi nganye
Ukuqonda okucacileyo- inkcitho
Inkcazo: qala intetho, cela umntwana ukuba aphathe ukutya ngokufunda phezulu ngasekunene, ucofe utolo ukutya okuya kungena kwinqwelo.
Fumana umntu oza kungena naye ngaphakathi
Inkcazo: qalisa intetho kwaye ubuze umntwana ukuba achukumise umngeneleli, umfanekiso olungileyo uya kuhamba kuphela xa ucofa kuyo nemouse.
Inkcazo: qala umboniso kwaye ubuze umntwana ukuba achukumise umfanekiso oqala njengoweziko, xa umntwana echukumisa umfanekiso olungileyo, cinezela utolo lwasekunene ukuzisa ukomeleza.
Inkcazo: qalisa intetho kwaye ufunde isilayidi, cela umntwana ukuba achukumise umfanekiso oqala ngala silabhili, xa umntwana echukumisa umfanekiso olungileyo, cinezela utolo lwasekunene ukuzisa ukomeleza.
Imiqondo yendawo: Iphi?
Inkcazo: kuzo zonke ezi ppt kwizilayidi zokuqala ungabuza umntwana "uphi u-X?", Xa umntwana ephendula (umzekelo "kwibhasikithi"), ngokucinezela utolo olungasekunene umfanekiso uvela (umzekelo ibhasikithi) kwaye, ucinezela kwakhona, ukomeleza kuvela.
Kwizilayidi zokugqibela, kwelinye icala, kunokwenzeka ukukhuthaza ukwakhiwa kwezivakalisi ezandisiweyo ezilula ngoncedo lwegama lemibala: ungabuza umntwana ukuba "kwenzeka ntoni?" Ukucofa utolo ekunene kuya kuvela into ibe nye kwisivakalisi ngexesha.
ikhonkco: Lontano - in - Sotto - on - close
Inkcazelo: Kule ndlela ilula umntwana acelwa ukuba abize lo mfanekiso ungasentla kwaye, xa sele ebizwa, uyacelwa ukuba akhethe ibhasikithi efanelekileyo (iziqhamo okanye imifuno?).
ikhonkco: Khuphela kwi-drive
Izilwanyana: ukubonwa okubonakalayo kunye nokuhlolwa
Inkcazo: ngaphakathi kwefayile
Umdlalo ka-ewe no-Hayi
Iimfuno zokufunda ngokubhala
Umdlalo weMetaphonological werhanisi
Inkcazo: Kule mdlalo olula wehashe imigaqo yeyakudala.
Ukudlala kufuneka ubeke ifayile kwimowudi yokubonisa. Ngokubala inani lebhokisi ofika kuyo, uthunyelwa ngokuzenzekelayo kwisilayidi kunye nomsebenzi oza kwenziwa. Umsebenzi ngamnye une-animation esebenze xa imouse icofa.
Isilumkiso. Kufuneka uvavanye ukusebenza kuqala ngoba ukuba ucofa imouse amatyeli amaninzi uphela kwisilayida esilandelayo.
Ukubuyela kwiscreen ngengoma, cofa nje kwi icon yeMinnie Mouse engezantsi.
Ukuziqhelanisa kancinane kwaye yonke into iba lula 🙂
Isiphene ekuphela kwaso .. azikho iinyama kodwa ... siqeqesha inkumbulo ngokubuza umntwana ukuba akhumbule isikhundla sakhe !!
Ukuseta kwe / s / + komhlanganiso kwiziko eliphakathi
Uyilo / f / lwendawo yokuqala
Amagqabantshintshi ngamagama e-bisyllabic
Umsebenzi wesandi F
Ubuncinci bezibini zeTD
Ubuncinci bezibini / t / - / k /
Iziganeko zenyoka esithubeni - / sp / intervocalica
Imbali ye / k / e / ts /
Ababhali: I-Federic Demouras
Inkcazo: Qalisa intetho. Umntwana ade aphindaphinde amagama abomvu kuphela, emva koko ucofe kube kanye kwaye ulindele ukuba yonke into enokwenzeka yenzeke
Amabinzana anemvano-siphelo: umdlali kufuneka agqibezele isivakalisi ngokwenza imvano-siphelo
Imvano-siphelo ekhethiweyo phakathi kokukhetha ezimbini: umdlali kufuneka aqaphele, ukukhetha phakathi kokukhetha ezimbini, amagama anemvano-siphelo
ikhonkco: Imidumba Imvano-siphelo ekhethiweyo phakathi kweendlela ezimbini
Ucalucalulo / m / kunye / n / kwisibini esincinci
Ibhingo nge / v / yokuqala
Ibhingo eneefowuni ezahlukeneyo
Iqala nge-syllable yokuqala i-MA-SA
Iikhonsepthi ze-topological - uphi uDade kunye noLili
Ababhali: UDavid Mongelli kunye noLinda Bottura
Inkcazo: Ngaphakathi kwifayile
Ucalulo m / n
Ucalulo r / l
Umdlalo weGoose nge / k / median
Ukwahlula-hlulwa kweziqhamo: iziqhamo kunye nemifuno
Ababhali: U-Greta Calligaris
ikhonkco: Dlala kwiScratch
Ucalucalulo lwamagama afanayo
Inkcazo: Ukuba amagama ayafana, nje ukuba umntwana aphendule ngokuchanekileyo, cofa nje ibar yendawo kwaye isibini sabantwana abafanayo siya kuhamba, ukuba amagama ahlukile, cofa utolo lwasekunene. Xa esinye sezi zibini zisondela ebhasikithini, igama elithi "kuhle kakhulu" liya kuvela.
Imemori yahlula-hlulwe yifonme
Imbali yokuseta i / k /
Amabali ezentlalo kunye neemvakalelo
I-Alice kunye ne-vagaries
Iimvakalelo kunye nemeko yengqondo
Umbhali: Elisa Tosi
Intombazana encinci ebomvu ekhwela i-CAA
Umbhali: Manuela De Santis
ikhonkco: Bukela ividiyo kwiYouTube
Izilwanyana: ukubonakaliswa kweesimboli
Umbhali: U-Greta Calligaris
Umbhali: UAlice Marotta
Indlela yokuyisebenzisa: Ifayile esikalini ifayile ikuvumela ukuba uqeqeshe imemori yakho. Umsebenzi uquka ukukhumbula amagama afundwayo kwaye uwaphindaphinde ngokuvakalayo, emva kwenani elithile lokukhuthaza (1 okanye 2), xa uxande luba tyheli kwaye lungenanto. Sebenzisa ifayile ukuyibeka kwintetho kwaye emva koko kunye nemouse okanye ibha yendawo yenza izilayidi ziye phambili. Inqaku lamandla liyahlelwa, sele kukho izintlu ezi-4 ezinesithuba esingu-1 nesinye esinesibalo esingu-2, faka nje amagama amatsha kooxande
ikhonkco: Isithuba se-1 Isithuba se-2
Ukusebenza kwetafile yememori
Uyisebenzisa njani: Ngokwazisa kwitheyibhile evulekileyo, umntwana uyacelwa ukuba akhumbule izilabhasi kunye nezikhundla zazo. Ngokususa i-syllable etafileni kwaye eveze itafile ngomendo, umntwana kufuneka athi amagama amaqhosha akhoyo ngendlela.
Amakhadi esiphumo se-Stroop
Uyisebenzisa njani: Amakhadi omsebenzi okhawulezayo wokuqamba igama, kodwa kwimowudi ye-stroop
Iintolo zemidlalo ziye phezulu / ezantsi
umbhali: UIrene Dall'Ora
Inkcazo: Umsebenzi nguPASAT: kwimowudi yokubonisa uyacelwa ukuba ukhumbule inani elibonwe ngaphambili kwaye ulongeze kuleyo ukuyo
ukubukela. Kubantwana esele benamava kulo msebenzi, imibala ikuvumela ukuba uwenze nzima umsebenzi, umzekelo:
isenzo esithile sihambelana nombala;
utshintsho lomsebenzi luhambelana nombala (umzekelo ukusuka + ku-x)
Inkcazo: Uyacelwa ukuba unike igama inani ukuba iphepha limhlophe, ngelixa umbala wephepha uyafuneka ukuba umbala. Kubantwana abanamava ngakumbi, umbala unokunxulunyaniswa nomgaqo othile (umzekelo: "qhwaba izandla xa kubomvu", okanye "ungathethi nto xa kukho tyheli").
Ngaba siyaphazamisa ugqirha othethayo?!
umbhali: UDavid Mongelli
Ingcaciso: Isixhobo sokusebenza kunye:
- I-lexicon kwimveliso
I-lynx-umdlalo wokujonga obonakalayo
inkcazo: Khuphela imiyalelo
Ukujonga ukulandelelana kweemilo kunye nemibala
Inkcazo: Umboniso wenqaku lamandla aqukethe ukulandelelana kwemisebenzi ejolise ekuvuseleleni inkumbulo, ukubonwa, ingqalelo. Isigulana siceliwe ukuba sibe nomfanekiso-ngqondweni kunye nokukhumbula ukulandelelana kunye nokuma kwemibala kunye neemilo. Emva kokubonisa ulandelelwano ngalunye, abaguli baya kucelwa ukuba benze iintshukumo. Ukulandela ukwenziwa kwento eceliweyo, kuyacelwa ukuba kuqinisekiswe ukulandelelana kwemibala / iimilo eziboniswe ngaphambili, zilandela iikhrayitheriya ezinikiweyo.
Imemori kunye nokuBonakalayo ukuBekelwa ingqalelo
umbhali: U-Arianna Chiorri kunye no-Ilaria Mangino
Umsebenzi wohlulwe ngokwamanqanaba ama-3 obunzima obukhulayo.
Kwinqanaba lokuqala, umntwana uya kunikwa amakhadi amabini: ikhadi ngalinye linesilwanyana, umbala kunye nenombolo. Ukuboniswa kwamakhadi kuya kuhlala imizuzwana emi-5 kwaye umntwana kuya kufuneka abambe ngentloko kuphela inani kunye nesilwanyana kuwo omabini la makhadi. Emva komboniso uya kucelwa ukuba ukhumbule nokuba linani okanye isilwanyana eso.
Kwinqanaba lesibini umntwana kuya kufuneka akhumbule umbala wekhadi ngalinye.
Okokugqibela, kwinqanaba lesithathu, ukongeza ekukhumbuleni inani, isilwanyana kunye nombala wekhadi ngalinye, umntwana kufuneka alumke kuba iziphazamisi ziya kuvela ngexesha lokuvezwa kwamakhadi.
Izinto zememori zasekhaya
Kufundwa ii-syllables kunye namagama anefonim / k /
Kufundwa ii-syllables kunye namagama anefonim / v /
Umdlalo: iminatha ngemigca /ʃ /.
Ukufunda iisilabhs, amagama kunye neefonim kunye / s /, / ts / kunye / dz /
Ukuqwalaselwa kolungelelwaniso lokuqala
Inkcazo yemifanekiso + yokubhalwa kwezenzi
Imaphu yefonim / grapheme
Inkcazo: umntwana ubona umfanekiso kwaye kufuneka abhale igama elichanekileyo, kwangoko emva koko unengxelo ebonakalayo yokuqinisekisa ukuchaneka kwempendulo
ikhonkco: Iidrafti ze-CG kunye nee-Trigrams Imifanekiso yePB
ikhonkco: Iidrafti ze-CG kunye nee-Trigrams Isigqibo esipelo PB
Kufundwa amaqela ahlanganayo
Ababhali: Chiara Campana
ikhonkco: Dlala kwi-intanethi
Ukufunda kunye nokuqonda: I-Meatball
Inkcazo yemifanekiso enenkxaso yokubonakalayo kunye nokuva
Amakhadi okufunda ngokukhawuleza elishumi
Umbhali: Elena Matesini
Uyisebenzisa njani: Injongo kukufunda ngokukhawuleza isixa ngaphakathi kweshumi, nokukhumbula iipateni kwaye emva koko zikhumbule iinyani eziphambili ngo-10. Ukuba amakhadi aprintiwe, imidlalo nayo inokusetyenzwa rhoqo ngenjongo yokusebenza kunye yenziwe ngu-10.
Inani leqela lokudlala
URubazazzo ngamanani ngo-10
umbhali: UCamilla Zambianchi
Itafile yamaxesha amaxesha
umbhali: USilvia Cattaneo
Inkcazelo: Iiphindaphindwe iitafile iphazili aphefumlelwe Imodeli yoQeqeshiweyo yoQeqesho
Yamkela umzobo / ilitye lesikhumbuzo
ikhonkco: Ndawuqonda umzobo Yamkela ilitye lesikhumbuzo
Izinto ezenziwe nguAdriana Romano
Inkcazo: le folda iqulethe izinto ezahlukileyo ezenziwe ngugqirha wezengqondo uAdriana Romano. Ngokukodwa uya kufumana:
Imifanekiso yokwenza amakhadi
Ubuncinci bamakhadi amabini
Uqoqosho lophawu lwe-Bing